Top 10 Poems of November, 2019 – The Art Garden Rohingya
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ၊ အယ်ဒီတာအကြိုက် အ ကောင်းဆုံး မြန်မာကဗျာ(၅)ပိုဒ်
ဒုက္ခသည် ဘဝ | ရေး- Shahida Win
ရိုတို့ဘဝ/ | ရေး- BM Hairu
ဤတာရာ/ | ရေး – ငြိမ်းချမ်းနဂျမ်း (ရိုခရီးသည်)
လမ်းမှန်အတိုိုင်း ရှေ့သိုို့ရုန်းလျှောက်/ | ရေး – Shamin&Lalmoti
ရို့ မျက်ရည်ကျနေဆဲ/ | ရေး-Austin Jani
Art Garden Rohingya’s Top Burmese Poems of November, 2019
November 2019, Editors Choice (5) best English Poems
Question-Marks/??? | By Jahangir Alom
Internet/ | By Aershaad
Killing My Soul/ | By Saad @ Zia Hero Naing
Pain of Rain/ | By Mamu Rashid
A Flowerlike Life | By RY Maung Maung Khin.
Art Garden Rohingya’s Top English Poems of November, 2019
Are Shaad - December 13, 2019